Haaland oo doortay kooxdiisa cusub kaddib marka uu ka tago Borussia Dortmund – Gool FM
(Dortmund) 26 Nof 2021. Shabakada caalamiga ah ee Goal ayaa shaacisay in weeraryahanka naadiga Borussia Dortmund iyo xulka qaranka Norway ee Erling Haaland ayaa dooqiisa koowaad ka dhigtay in Real Madrid ay noqoto kooxdiisa cusub.
Magaca Erling Haaland, oo 21 jir ah, ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo Borussia Dortmund xagaaga soo aadan, kaddib markii uu ballanqaad ka helay maamulka kooxda oo u ogolaanaya inuu baxo.
Erling Haaland waa mid ka mid ah weeraryahanada ugu muhiimsan Yurub waqtigan, maadaama uu kooxdiisa Dortmund ilaa haatan u dhaliyay 70 gool 69 kulan oo uu ka qayb qaatay.
Real Madrid maaha kooxda kaliya ee xiiseynaysa inay la saxiixato Erling Haaland, laakiin sidoo kale waxaa xiiseyanaya kooxaha Manchester City iyo Paris Saint-Germain, laakiin xiddiga reer Norway ayaa Real Madrid ka dhiganaya dooqiisa koowaad.
Shabakada caalamiga ah ee Goal ayaa waxay sidoo kale tilmaamtay in wakiilka Erling Haaland ee Mino Raiola uu horey u sheegay in xiddiga uu guri ku leeyahay Spain, taasoo muujineysa inuu ku dhowyahay ku biirista kooxda Los Blancos.
Dhanka kale wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Borussia Dortmund ay sameyn doonto wax aan macquul aheyn si ay ugu qanciso ciyaaryahanka inuu sii joogo kooxda xilli ciyaareedka soo socda.
Waxaa xusid mudan in qandaraaska Erling Haaland ee kooxda Borussia Dortmund uu dhacayo xagaaga 2024.